ပရိတ်သတ်တွေ စံချိန်တင်လောက်တဲ့အထိ ရုံကွဲရုံလျှံအားပေးခဲ့တာကြောင့်...
ပရိတ်သတ်တွေ စံချိန်တင်လောက်တဲ့ အထိ ရုံကွဲရုံလျှံအားပေးခဲ့တာကြောင့်
ဇာတိဟင်္သာတမြို့ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဖြိုးမြတ်အောင်ကို ပရိတ်သတ်တွေ ရုံကွဲရုံလျှံအားပေး
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပွဲအဆူဆုံးပွဲတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါမှ ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာ ဖိုင်နယ်ပွဲမတိုင်မီ မယ်ဆွယ်ဖို့ Idol ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဇာတိမြေ ဟင်္သာတကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင် နည်းတူ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကိုလည်း နေရပ်ပြန်မဲဆွယ်ဖို့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
ဖြိုးမြတ်အောင် အတွက်ကတော့ ဇာတိဟာ ဟင်္သာတကဖြစ်လို့ ရန်ကုန်မှ ထွက်လာပြီး ဧရာဝတီတိုင်းမှ ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ရောက်ကတည်းက ဧရာတိုင်းသားတွေ တခဲနက် ကြိုဆိုခဲ့ကြရာ တိုင်းပွဲတော်ကြီးအလား စည်ကားခဲ့ပါတယ်။
မနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ မိုးရွားတဲ့ကြားကနေ ပရိတ်သတ်တွေက အားပေးကြိုဆိုကြပြီး ဖြိုးမြတ်အောင် ကိုယ်တိုင်လည်း မိုးမိ၍ဖျားကာ ဆေးသောက် ဆေးထိုးရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးထံသို့ သွားရောက်ဦးချခဲ့ပြီး ညနက်ပိုင်းအထိ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတာ်။
ဒီနေ့ နေ့လည် ၃ နာရီမှာတော့ ဟင်္သာတမြို့ မြို့တော်ခန်းမမှာ ဖြိုးမြတ်အောင် show ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီး ရပ်ဝေးရပ်နီးမြို့တွေကပါ လာရောက်အားပေးကြလို့ မြို့တော်ခန်းမကြီး ပြည့်လျှံသွားကာ လူငယ်အချို့ ခေါင်းမိုးထောက် သစ်သားတန်းများပေါ်ကနေ ကြည့်ရှု့ရတဲ့အထိ စည်ကားသွားပါတယ်။
မြန်မာအိုင်ဒေါ Grand Final ကတော့ နောက်တပတ် စနေနေ့ည ၇ နာရီခွဲမှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပပြီးစီတော့ပါမယ်.. ပွဲစဉ်တလျှောက်လုံးနာမည်ကြီးလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ကပဲ winner ဖြစ်သွားမလား ခုနောက်ပိုင်း vote အများဆုံးနဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကပဲ ဆွတ်ခူးသွားမလား ဆိုတာကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရဦးမှာပါ..
Winner ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်း နတ်တော်တော်ကြီးပုံရနေပါတယ်.. ကောင်းတာဆိုးတာနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ကောင်းနေရုံနဲ့မလုံလောက်ကြောင်းMyanmar Idol က အကြိမ်ကြိမ်သက်သေပြခဲ့ပြန်တယ်လေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူပဲ winner Trophy ကြီးကို ထိုက်တန်စွာဆွတ်ခူးပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း….
Writer – Robert ငြိမ်းမောင် – Myanmar Live လတ်တလော မြန်မာ့သတင်းများ Page
ပရိတျသတျတှေ စံခြိနျတငျလောကျတဲ့ အထိ ရုံကှဲရုံလြှံအားပေးခဲ့တာကွောငျ့
ဇာတိဟင်ျသာတမွို့ ဖြျောဖွပှေဲမှာ ဖွိုးမွတျအောငျကို ပရိတျသတျတှေ ရုံကှဲရုံလြှံအားပေး
လကျရှိမွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပှဲအဆူဆုံးပှဲတဈခု ဖွဈတဲ့ မွနျမာအိုငျဒေါမှ ဖွိုးမွတျအောငျဟာ ဖိုငျနယျပှဲမတိုငျမီ မယျဆှယျဖို့ Idol ရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ ဇာတိမွေ ဟင်ျသာတကို ရောကျရှိနပေါတယျ။ ဖွိုးမွတျအောငျ နညျးတူ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကိုလညျး နရေပျပွနျမဲဆှယျဖို့ ခှငျ့ပွုထားပါတယျ။
ဖွိုးမွတျအောငျ အတှကျကတော့ ဇာတိဟာ ဟင်ျသာတကဖွဈလို့ ရနျကုနျမှ ထှကျလာပွီး ဧရာဝတီတိုငျးမှ ကွိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့ ဆိုငျးဘုတျရောကျကတညျးက ဧရာတိုငျးသားတှေ တခဲနကျ ကွိုဆိုခဲ့ကွရာ တိုငျးပှဲတျောကွီးအလား စညျကားခဲ့ပါတယျ။
မနကေ့ တနင်ျဂနှနေေ့ မိုးရှားတဲ့ကွားကနေ ပရိတျသတျတှကေ အားပေးကွိုဆိုကွပွီး ဖွိုးမွတျအောငျ ကိုယျတိုငျလညျး မိုးမိ၍ဖြားကာ ဆေးသောကျ ဆေးထိုးရတဲ့အထိ ဖွဈသှားပါတယျ။ ညပိုငျးမှာ သူကိုးကှယျတဲ့ ဘုနျးကွီးထံသို့ သှားရောကျဦးခခြဲ့ပွီး ညနကျပိုငျးအထိ ပရိတျသတျတှနေဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပါတျာ။
ဒီနေ့ နလေ့ညျ ၃ နာရီမှာတော့ ဟင်ျသာတမွို့ မွို့တျောခနျးမမှာ ဖွိုးမွတျအောငျ show ပှဲကငျြးပခဲ့ပွီး ရပျဝေးရပျနီးမွို့တှကေပါ လာရောကျအားပေးကွလို့ မွို့တျောခနျးမကွီး ပွညျ့လြှံသှားကာ လူငယျအခြို့ ခေါငျးမိုးထောကျ သဈသားတနျးမြားပျေါကနေ ကွညျ့ရှု့ရတဲ့အထိ စညျကားသှားပါတယျ။
မွနျမာအိုငျဒေါ Grand Final ကတော့ နောကျတပတျ စနနေညေ့ ၇ နာရီခှဲမှာ ခွိမျ့ခွိမျ့သဲကငျြးပပွီးစီတော့ပါမယျ.. ပှဲစဉျတလြှောကျလုံးနာမညျကွီးလာတဲ့ ဖွိုးမွတျအောငျကပဲ winner ဖွဈသှားမလား ခုနောကျပိုငျး vote အမြားဆုံးနဲ့ဦးဆောငျနတေဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကပဲ ဆှတျခူးသှားမလား ဆိုတာကို ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစှာနဲ့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုရဦးမှာပါ..
Winner ဖွဈဖို့ဆိုတာကလညျး နတျတျောတျောကွီးပုံရနပေါတယျ.. ကောငျးတာဆိုးတာနဲ့ သကျဆိုငျတယျဆိုပမေဲ့ ကောငျးနရေုံနဲ့မလုံလောကျကွောငျးMyanmar Idol က အကွိမျကွိမျသကျသပွေခဲ့ပွနျတယျလေ.. ဘာပဲဖွဈဖွဈ အတျောဆုံးအကောငျးဆုံးသူပဲ winner Trophy ကွီးကို ထိုကျတနျစှာဆှတျခူးပါစလေို့ဆန်ဒပွုရငျး….
Writer – Robert ငွိမျးမောငျ – Myanmar Live လတျတလော မွနျမာ့သတငျးမြား Page